White sy Blue
White sy Gray
Ny Linen Clothing rehetra
Lamina Lanitra Bohemian Top $67.00
Multicolored Dress Sweater Dress
Multicolored Dress Sweater Dress $87.00
Lovely lava asymmétique $67.00
Mofomamy malefaka $54.00
Loose Plus Size Anklements Sweater Dress
Loose Plus Size Anklements Sweater Dress $54.00
Tafiotra Batwing Linen ovale
Tafiotra Batwing Linen ovale $92.00
Linen Wrap Cardigan $73.49
Plus Size T-shirt Dress $69.00
Hosea Dress Hosea Dress
Hosea Dress Hosea Dress $89.00
Tavy fotsy hoditra lava lava
Tavy fotsy hoditra lava lava $76.20
Pink Lotus Linen Dress $71.10 $79.00
Tavy rongony marevaka $67.00
Vintage Floral Shirt $58.00
Plus Size Loose Grey Dressed Overall Dress $55.50 $74.00
Fialam-boly foana ny fividianana teboka Raha mitady karazana tank vaovao ianao hikosehana any amoron-dranomasina na mpivarotra vaovao hanangom-bokatra mandritra ny fijerena ny sarimihetsika fialantsasatra ankafizinao indrindra, dia manolotra karazan'akanjo sy t-shirts, akanjo amam-bolo ary maro hafa, ny Buddhatrends Miantsena amin'ny tops izay mahafinaritra kokoa!
Ho hitanao fa ny tokantranonay dia ho tokana tsy manam-paharoa, manome ny fahaleovan-tena sy ny fampiononana ho an'ny mpanjifa rehetra. Ohatra, ny Sweater Dresses dia goavana toy ny Dresses amin'ny akanjontsika raha toa ianao ka eo am-pandehananao amin'ny zavatra iray mba hikorontana ary manaitra rehefa mandeha any amin'ny cafe, mankany amin'ny sinema, na koa manao zavatra isan'andro .
Ireo zavatra toy ny Blouses, T-shirts, Tank Tops, ary Cardigans dia samy afaka mahatsiaro tena tsara avokoa, fa rehefa mividy Buddhatrends dia lasa mahatalanjona izy ireo! Manolotra ny mari-pamantarana nosavirintsika ho an-dalam-pandinihana an-dalambe aho ary ohatra mendrika ho an'ny fety mozika na fanangonana olona mamorona sy tany am-piandohana izay tsy matahotra ny hitsahatra.
Ny tontolon'ny tranokalanay rehetra dia natao ho an'ny olona izay tsy matahotra ny hitsangana ary hanao fanambarana, na izany aza, ny mitsangana dia tsy midika foana hoe te-ho tezitra ny olona. Ny famoriam-bokatsika ao amin'ny Tops ihany koa dia manolotra zavatra mivaingana sy maotina izay mbola mitoetra ho samy hafa amin'ny vehivavy maniry hanao fanambarana tsy misy dikany. Ny Tendron'ny asan-trompetra sy ny lamba rongony dia ohatra tonga lafatra raha ny mpividy mamaky ity dia ilay vehivavy izay mikaroka ny fandanjalanjan-tena tanteraka amin'ny fahendreny sy ny maha-izy azy.
Ny Boddhatrends dia manana tangom-bidy izay manolotra safidy ho an'ny vehivavy rehetra, ireo izay tsotra sy tsotra ary ireo izay marefo sy mikatsaka ny fahaleovan-tena. Mandritra ny fampidirana ny fahatsapan'ny fialan-tsasatra toy ny tsy misy tsilo dia mafy, ary izany no tena hatsaran-tarehin'ity andiany ity. "